Anokurudzira wechidiki anofamba panhandare yenhabvu mushure memakore gumi ari pawiricheya
Inokurudzira vechidiki stuns panhandare yenhabvu mushure memakore gumi muwiricheya
Posted on November 19, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Mumwe wechidiki mudzidzi wepamusoro anobva kuTexas akashamisa boka revanhu paakafamba mumunda kumutambo wekupedzisira wenhabvu wechikoro chemwaka uno, uye nzira yakadii yekupedzisa mwaka! Kune Tyler Bain ane makore gumi nematatu ekuberekwa, kufamba kunoreva zvakawanda kupfuura vanhu vazhinji.
Tyler akarwara nenjodzi yemotokari makore gumi apfuura izvo zvakaita kuti aiswe mu wiricheya, mishumo News-Journal.com.
Ichi chinoratidza kekutanga kubvira tsaona yakafamba naTyler pamberi pevateereri, uye pasina munhu pachikwata aiziva zvirongwa zvake. Uye sezvaari akaita nzira yake yekuyambuka makumi mashanu eiyadhi mutsara, vamwe vake vechikwata vakamurumbidza. Iyi nguva inokurudzira ndeimwe yausingazombokanganwa.
"Ndiri kufara kuti ndazosvika pakuratidza zvandingaite," akadaro Tyler. "Kunyangwe ndiri mu wiricheya, usaende nechitarisiko changu. Enda nezvandinazvo mukati, moyo. "'Chirevo chisingagone kuve chechokwadi. Tinofanira kutarisa kuvanhu'masimba uye kugona uye kutsigira zvese zvinangwa zvavo. Kutsunga kwake kufamba nemunda iwoyo kunoshamisa. Tyler anonzwika achiudza vamwe vake "Kana ini ndichigona kuita izvi, imi mese munogona kuita chero chinhu." Iyi nyaya huru zvechokwadi inoenda kukuratidza kuti kunyangwe iwe ukavharirwa mu wiricheya, chero chinhu chinogoneka!
[btn link = "http://ktar.com/241/1678500/Inspiring-teen-walks-on-football-field-after-a-decade-in-a-wiricheya"color =" orange "target =" _ blank "] Verenga Nyaya Yakazara [/ btn]
Mawiricheya anogona kutungamirirwa nenzeve
Mawiricheya anotumirwa kuPhilippines Pashure Penjodzi Dutu